★မြန်မာ့အလင်း★: ခွေးနဲ့ တမန်တော်မိုဟာမက် . . . မျောက်နဲ့ မွတ်ဆလင်
အထက်ဗီဒီယိုကတော့ မျောက်တစ်ကောင် ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပါ
အထက်ဗီဒီယို၂ခု ကတော့ မွတ်ဆလင်များ စစ်သားများ စစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပါ။
ခွေးကတော့ လူရဲ့ချေးကိုစားပါတယ် . . တမန်တော်ကြီး မိုဟာမက်ကတော့ ကုလားအုပ်ရဲ့သေးကိုသောက်ပါတယ်။ ခွေးပါးစပ်နဲ့ မိုဟာမက်ပါးစပ် ဘယ်ပါးစပ်က ပို၍ သန့်မည်နည်း? မျောက်ကတော့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကို ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်ပါတယ်။ တမန်တော်ကြီးမိုဟာမက်တပည့်တွေကတော့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတောင် လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ တမန်တော်နဲ့ သူရဲ့နောက်လိုက်တွေ လိုက်ဖက်ညီပါပေတယ်။ ဒန်.. . ဒန်.. ဒန်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:37 AM